AutoCAD Civil 3D, dhibcaha soo dejinta laga helo keyd dibadeed - Geofumadas
Mashruucan waxaan ku arki doonaa sida looga soo dhoofiyo xogta keydka bannaanka, in kasta oo aan tixgelin doonno dhinacyo dheeri ah oo ku saabsan maareynta qodobbada. Waxaan isku dhisi doonnaa tusaalaha uu keenayo casharka 3D-ga ah ee madaniga ah, adoo adeegsanaya feylasha dhibcaha-1.dwg iyo points.mdb, dhamaadka waxaa jira xiriiriyeyaal soo degsada
Abuur Qoraalada Furaha
Ujeeddada tani waa in la qaabeeyo sida Civil 3D u maamuli doono qodobbada aan soo dhoofsanno, halka ay ku kaydin doonaan iyo shuruudaha ay ka xulanayso keydka xogta. Haddii aan furno keydka macluumaadka, marka laga reebo isku-darka y, x, z waxaan aragnaa aagga sharraxaadda (DSC) oo ay ku jiraan nooca dhibic, sidaa darteed waxaan dooneynaa inaan awood u yeelano inaan kala-saarno qodobbadaas
Marka hore waxaan fureynaa feylasha dhibcaha-1.dwg oo horeyba uheshay lakabyo layligan loogu talagalay. Hadda aagga qalabka, "tabka" tabka, waxaan dooranay "Faahfaahinta Faahfaahinta Faahfaahinta" waxaanna midig u gujineynaa oo dooranaynaa "cusub".
Tani waxay fureysaa guddi meesha aan ku qori doonno magaca qormada, taas oo aan ku siin doonno magac iyo sharax.
Waxaan isticmaalayaa magaca "Duufaan" iyo sharraxaadda "dhibcaha xakamaynta duufaanka". Kadibna waxaan "aqbalnaa".
Hadda waxaan qeexaynaa sida 3D maareyn karto shaandhada labadaba si ay u soo dejiyaan xogta iyo inay doortaan lakabka meesha lagu kaydin doono.
Waxaan ballaarineynaa xajinta adigoo gujinaya midigta iyo xulashada "Isticmaalka Furayaasha", kaas oo noo ogolaanaya inaan aragno guryaha qaabka "panorama".
Halkan waxaan ku dari doonaa laba lambar, midka koowaad ee loo yaqaan POND *, halkan waxaan dooran doonaa in Layer V-NODE-STRM
iyo MHST ah * kale, waxaad bedeli format DABAYLO MH ee kiiska labaad, in ka dhigan tahay in tani waxay noqon lahayd in uu calaamadda ugu horeysay laakiin waxa ay ka tagaan sida $ *, si ay sharaxaad ka yimaado dhamaystiran oo had iyo jeer ee lakabka isla.
Tani waxay ka dhigan tahay in qodob kasta oo sharraxaaddiisu ay ka bilaabato POND ama MHST, oo ay ku xigto dabeecad kasta lagu dari doono ururinta. Maskaxda ku hay in hanaankani yahay "kiis xasaasi ah", waxay macnaheedu tahay inuu yahay mid xasaasi u ah kiiska.
Labada xaaladoodba, qaabka qaabka iyo astaanta labaduba waxay u diidi karaan. si loo xakameeyo heerka kooxda, taas oo ah waxa soo socda ee aan sameyn doono.
Ugu dambeyntii waxaan dooranaa fallaadhta cagaaran ee geeska saxda ah si loo badbaadiyo qaabeynta.
2. Abuur kooxo dhibcood
Hadda waxa na xiiseynaya ayaa ah in qodobbada la soo dhoofiyay la isugu geeyay, xaaladdan iyada oo loo eegayo astaamo ay ku leeyihiin keydka macluumaadka. Si tan loo sameeyo, waxaan aadeynaa tabta "prospektore" iyo xulashada kooxaha dhibcaha aan ku riixno midig, xulashada "cusub".
Aynu marka hore abuurno koox aan ugu magacdari doonno “godadka duufaanka” oo waxaan uga tagi doonnaa barta iyo qaabka ay ku qorantahay qaab ahaan istaandarka. Kadib shaandhada ciyaarta (cayriin Desc Matching) waxaan dooranaynaa MHST *, tani waxay kadhigi laheyd dhamaan dhibcaha tan leh ee sharaxaadooda waxay u tegi lahaayeen kooxdan.
Kooxda labaadna yeedhi doonaa "Xayiraad Point" ka tago sidii balli filter a *, taasoo ka dhigeysa Standard ee style iyo dhibic calaamad inkasta oo ay tani waxaa la samayn karaa mar koox la yiraahdo "Points _all".
Dabcan, haddii aan aragno Query Builder tab wuxuu u muuqdaa midkani waxaan dooranay SQL, taas oo tusinaysa in qofkii caqli galka ah uu sameyn karo waxyaabo badan oo adag.
3. Macluumaadka ka soo dejiya xogta
Waxa ugu adag ee aan qabanay, hadda waxa soo socda waa in ay soo dejiyaan.
Had iyo jeer ku qor tabka, dooro dhibcaha leh badhanka midigta midig oo dooro "Abuur".
Kani wuxuu soo bandhigayaa guddi leh ikhtiyaarro kala duwan, xaaladdan waxaan u adeegsan doonnaa midigta midigta fog ee soo dejinta dhibcaha. Marka la xusho, na weydii
Waxaa lagama maarmaan ah in la caddeeyo in qaabka aad dooran karto xulashooyinka kale ee soo dejinta sida qoraallada kala-jajaban, meelaha iyo noocyada kala duwan ee nidaamka dhibcaha, x, y, z coordinates
Halkan waxaan ku dooraneynaa in soo dejinta ay ka timid keydka macluumaadka dibedda ka dibna waxaan dooranaynaa waddada keydka xogta. Waxaan tagnaa adoon dooran xulashooyinka hoose, ka dib ok.
Natiijada kama dambeysta ah waxaa lagu soo bandhigi karaa midigta midigta "dhibcaha _all" iyo doorashada zoom-ga si aad u aragto aragtida buuxda.
By keeno mouse ka badan dhibcood, tip qalab muujiyo sifooyinka barta, ka fiirso in ay lagama maarmaan tahay in la xaq-riix koox kasta oo ka mid dhibcood iyo guryaha la doortay, haddii icon jaalaha dhibic Xaasaasi ah waa in la soo xulay cusboonaynta doorasho.
Si aad u sameysid jimicsiga waxaad ka soo dejisan kartaa halkan faylka dwg iyada oo la eegayo dhibcaha la soo dejiyo
Haddii aad rabto inaad mar labaad sameyso, waad tirtiri kartaa dhammaan qodobbada jira si aad mar kale u soo dhoofiso adoo raacaya tallaabooyinka layligan.
Post Previous" Hore Imtixaanka Netbook ee CAD / GIS
Post Next Sida loo abuuro cilaaqaadyo leh AutoCAD Macaamiisha 3DNext »
13 Jawaab ah "AutoCAD Civil 3D, dhibcaha soo dejinta ee keydka xogta dibadda"
Samuel isagu wuxuu leeyahay:
Ma keeni karo qodobbada ugu sareeya. mabaadiida rayidka iyo garaafka oo adkeyso inaad hesho mugga haddii aad i caawin karto
Waan ka xumahay, ma heysano wax la heli karo.
Mahadsanid, waa maxay? Waxaan ku weydiin karaa qaabka xogta database in .mdb si aad u dhaqanto. Waad mahadsan tihiin.
TRUQUE isagu wuxuu leeyahay:
Thanks for tutorial ah, hadda sida aan soo dhoofsadaan blocks in ay ku sii jira sawir, ie Acad dalka furaha aad siven inay dajiyaan block sida geedaha saldhigyada ulo, ugu dambeyntii, mahad iskaashi ee tema.si this kartaan sokeeye 3d sameeyo iyo waxa habka ..
Fadlan haddii SHARAX SIDA LOO DHAAF The style default LABEL, TOCA ME SABABTA GOORTA CONFUGURARLOS IMPORTO POINTS.
WAXAAD U BAAHAN TAHAY WAXBARASHO.
KU SALAYSO DADKA AAN HELO
g! Waad ku mahadsan tahay waxtarkaaga. Way igu fiicantahay aniga
Hagaag, fikrad kama haysto waxa dhici kara. Waxay noqon kartaa in qaabku uusan lambarada aheyn laakiin sida jilayaasha, laakiin waa inaysan dhibaato noqon.
WAXAAD KA QAADEYSO KA QAYBGALKA ILLUSTRATIVE
mahad tutorial waa wanaagsan yahay, laakiin waxaan dhib markii aan samayn sidii markii degida dhibcood ka database ee Access ii q aan ama file hallaabo kartaa sheegayaa, mahad inaad i soo caawisaa haddii aanan wax qalad ah
Waad ku mahadsan tihiin lacagahaas.
Ma ahan lagama maarmaan, xaqiiqadu waa in Mashruuca Land uu dhaxlayo waxa ka ahaa SoftDesk taas oo ay tahay in ay noqoto mid xog-ururin ah oo lagu keydiyo shuruudaha iyo iyada oo aanay jirin mashruuc furan oo aan suuragal ahayn in la shaqeeyo.
Xaaladda Madaniga ah, inkasta oo ay la xiriiri karto xogta, khariidadu waxay kaydin kartaa sifooyinka sida xml.
Ugu horreyntii waad ku mahadsan tahay waxbarista aad ku siiso boggaaga, iyo shaki shacbi 3d oo ka duwan kan desktop desktop lagama maarmaan ma ahan inaad laxiriirto mashruuc.
Waad ku mahadsan tahay Master, waxaan sii waday caawimaadyada, sida profiles dusha sare, iwm.